April 27, 2019 | Kichuu
Xanachi (cancer) Buqqisanii Darbuu Malee Waldhaansa Hin Qabu! Damee Boruutiin, Ebla 27, 2019 Xanachi dhukkuba keessaa isa hamaa dha. Qaamuma ofii kana deebisee bineesa godhee nama nyaachisuu caalu daddaffiin lubbuu nama keessaa baasa. Dhukkuba [Read More]
Hawaasa Oromoo Washington DC fi naannawa jiraattan maraaf Jaarmayaan Hawaasa Oromoo Sambata Xiqqaa Caamsaa 4, 2019 tti walgahii ummataa qopheessee jira. Walgahii uummata kana irratti akka argamtani fi irraa hirmaattan kabajaa guddaa waliin isin affeerra. [Read More]
Asli Galgalo : Jiilaa halkani boraana ykn borana night amma
Asli Galgalo: Jiilaa halkani boraana ykn borana night amma jalaqabachuu jirraa Jiilaan deema Asli Galgalo Baayyee namatti tola jabaadhaa ﻿
Artist Kadir Martu new music 2019 ”Naa Ifi Yaa Aduu”
Ibsa Gaddaa : Du’aan Boqochuu Dr. Nagaasoo Gidaadaa
Ibsa Gaddaa ! Du’aan Boqochuu Dr. Nagaasoo Gidaadaa Ilaalchisee Qabsaawota Oromoo gameeyyii keessaa tokko kan turan Dr. Nagaasoo Gidaadaa guyyaa har’aa (Ebla 27, 2019) du’aan boqochuu gadda guddaadhaan dhageenye. Pirezdaantii Itoophiyaa kan duraanii Dr. Nagaasoo [Read More]
Hin irranfatamtuu yoguu Hara’a , Jiruun jollumma gandaa badiyya Mee Eenyu yadataa jiruu jolummaa?
Shirri #Yuunivarsiitii_Rifti_Vaalii irratti hojjetamu ,shira Habashoonni Dhaabbilee Oromoorratti hojjetaniin hidhata qaba. Yuunivarsiitiin Riift Vaalii hojii baruu fi barsiisuun alatti guddina biyyaa keessattis ta’ee rakkoowwan ariifachisaa biyyatti muudachaa ture keessatti gahee inni bahaa turee fi jiru kan dagatamuu [Read More]
Sabboonummana Oromoo taankii fi xiyyaara waraana Oromoo ti; meeshaa hidhannoo Oromoo ti. Irraa dhaabbadhaa! Haga kaayyoon keenay galii gahurri, haga galiin keenya dhugoomutti, meeshaa hidhannoo keenya jabeeffachuu malee laaffisuun hin ta’u. Diinni garuu hidhannoo keenya [Read More]
Pirezidaantiin FDRI duraanii Doktar Nagaasoo Gidaadaa boqatan. Doktar Nagaasoon Jarmanitti waldhaansa irra turan. Doktar Nagaasoon bara 1987 kaasee pirezidaantii FDRI ta’uun waggoota 7f tajajailaniiru. Pirezidantiin FDRI duraanii kabajamoo Dr. Nagaasoo Gidaadaa addunyaa kanarraa du’aan boqotaniiru. [Read More]
DIRE DAWA: OMN Studio Inauguration
DIRE DAWA: OMN Studio Inauguration OMN: Oduu Guyyaa (Eebila 27,2019) OMN: Marii Asallaa kutaa xumuraa (Ebla 27, 2019)